Kooxda Barcelona oo ku rajo weyn inay maanta ku dhawaaqdo heshiis kordhinta cusub ee Lionel Messi – Gool FM
(Barcelona) 05 Agoosto 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay ku rajo weyn tahay inay ku dhawaaqdo Maanta oo Khamiis ah heshiis kordhinta cusub ee Lionel Messi.
34-sano jirkaan ayaa heshiiskiisii hore ee uu kula jiray Kooxda Catalan waxa uu ku ekaa dhammaadkii bishii June, taasoo la micno ah inuu hadda yahay beeca xorta ah oo uusan awoodin inuu la bilaabo xilli ciyaareedka 2021-22 kooxda Ronald Koeman.
Waxaa jiray soo jeedinno ah in xiddiga reer Argentina uu ogolaaday heshiis cusub oo shan sano ah, iyadoo la dhimayo mushaarkiisa, laakiin weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Barcelona.
Sida ay warinayso Jariiradda Mundo Deportivo, kaliya faah-faahinta ugu yar ee heshiiska ayaa u baahan in wax laga qabto, kooxda ka dheesha horyaalka La Liga ayaana ku rajo weyn inay khamiista maanta ah war rasmi ah ka soo saarto arrinta Weeraryahankan.
Warbixinta ayaa intaa ku daraysa in kooxdu ay aad ugu baahan tahay in heshiiska la saxiixo ka hor kulanka Joan Gamper Trophy ee ay la ciyaarayaan Juventus fiidnimada Axadda.
Messi oo isku dayay inuu si xor ah uga tago garoonka Camp Nou sanadkii hore ayaa dhaliyay 38 gool 47 kulan oo uu u saftay heer koox xilli ciyaareedkii hore ka hor inta uusan xulkiisa ka caawinin xagaagan inay ku guuleystaan ​​Copa America.